भक्तपुरमा पनि लगाइयो कोरोना खोप – indepth.com.np
१४ माघ २०७७, बुधबार २१:००
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउँदै भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतम । तस्विर : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने ४ सय ८ जना स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीले भक्तपुरमा पहिलो दिन खोप लगाएका छन् । भक्तपुरमा उनीहरुको लागि भक्तपुर अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।
जसअनुसार भक्तपुर अस्पतालमा २ सय ६९ र नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा एकसय ३९ जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारले जानकारी दिए ।
जिल्लामा करिब ४ हजारलाई खोप दिन दुई अस्पतालमा चारचार वटा खोप दिने स्थल निर्माण गरिएको थियो । सुरुमा खोप कार्ड निर्माणको लागि रजिस्ट्रेसन केन्द्रमै अलमल हुँदा बुधबार पहिलो दिन लक्ष्यभन्दा कमलाई मात्र खोप दिन सकिएको प्रमुख मिजारले बताए ।
भक्तपुरमा दुई केन्द्रमा दैनिक आठआठ सय जनालाई खोप दिने लक्ष्य राखिएको थियो । तर बुधबार पहिलो दिन २५ प्रतिशतले मात्रै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पाए । भक्तपुरमा तीन दिनभित्रै ४ हजारलाई खोप दिइसक्ने लक्ष्य राखिएको ।
‘नाम रजिस्ट्रेसन गरी खोप कार्ड बनाउनमै धेरै अलमल भयो’, प्रमुख मिजारले भने, ‘जसले गर्दा पहिले दिन लक्ष्यअनुसार खोप दिन सकिएन ।’
उनले बढी समय लागे पनि निर्धारित सबैलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिइने स्पष्ट पारे ।
भक्तपुरमा बुधबार भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएर खोप सेवाको सुरुवात गरेकी थिइन् । भक्तपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारको लागि भक्तपुर अस्पताललाई हब अस्पताल मानिएको छ । भक्तपुरमा करिब ४ हजार जनालाई खोप दिने लक्ष्य रहे पनि सूचना व्यवस्थापन युनिट (आईएमयू) मा करिब ३ हजार ७ सयले मात्रै आफ्नो नाम दर्ता गरेको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख मिजारले भक्तपुरका दुई अस्पतालमा एकएकसय जनालाई खोप दिएपछि खोप दिने कार्यमा खटिएका चार जनाको समूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
खोप केन्द्रमा सँगसँगै परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको छ । खोप लगाएकाहरुलाई केही समय अब्जरभेसनमा राख्ने छुट्टै वार्डको पनि व्यवस्था गरिएको छ । खोप लगाएका कसैलाई साइड इफेक्ट देखिए तत्काल उपचारको लागि चिकित्सकसहितको टोलीसमेत दुइटै अस्पतालमा तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।